Adobe Creative Cloud Express: Qaababka Quruxda badan ee nuxurka Warbaahinta Bulshada, Logos, iyo in ka badan | Martech Zone
Markay Mari Smith sheegtay inay jeceshahay a qalab loogu talagalay suuqgeynta Facebook, waxay ka dhigan tahay inay mudan tahay in la fiiriyo. Taasina waa wixii aan sameeyay. Adobe Creative Cloud Express, oo hore loogu yiqiin Adobe Spark, waa shabakad isku dhafan oo bilaash ah iyo xalka mobilada ee abuurista iyo wadaaga sheekooyinka muuqaalka leh ee saamaynta leh. Hal-abuurka Cloud Express waxa uu fududeeyaa in lagu bilaabo tiro badan oo qaabaysan oo si xirfadaysan loo qaabeeyey iyo hantida loogu talagalay nuxurka warbaahinta bulshada, calaamadaha, iyo in ka badan.
Adigoo isticmaalaya Adobe Creative Cloud Express, waxaad si fudud u abuuri kartaa garaafyada bulshada, summada, waraaqaha waraaqaha, boodhadhka, Sheekooyinka Instagram-ka, xayaysiisyada, Boodhadhka YouTube-ka, Boodhadhka, Kaararka Ganacsiga, Sawirrada YouTube-ka, iyo in ka badan. Madalku waxa uu leeyahay kumanaan qaab-dhismeedka oo ay la socdaan sawirro bilaa royalty ah oo aad isticmaali karto.
Markaad gasho adoo isticmaalaya Aqoonsiga Adobe ama galitaanka bulshada, waxaad bilaabi kartaa mashruuc cusub ama waxaad gali kartaa mashruucyo hore oo aad hore u bilawday ama dhamaystirtay. Madalku waxa loo dhisay qofka aan naqshadeeyaha ahayn, isaga oo awood kuu siinaya in aad samayso wax kasta oo aad u baahan tahay, dhammaan hal meel, oo leh qalab dareen leh oo kuu ogolaanaya inaad ka saarto asalka, qoraalka noole, ku darto astaantaada, iyo wax ka badan. Dhawr tuubbo oo keliya waxaad ku beddeli kartaa cabbirka bogga kasta oo warbaahinta bulshada oo waxaad ku dari kartaa saamaynta tayada Adobe Photoshop si degdeg ah.
Waxaad sidoo kale la wadaagi kartaa summada, xarfaha, iyo walxaha kale ee summada leh kooxdaada, oo waxaad daabacan kartaa oo la wadaagi kartaa dukumeenti PDF ah oo leh astaamo ay ku shaqeyso Adobe Acrobat - si aad had iyo jeer u horumariso shaqadaada ugu fiican. Ka shaqee miiska miiska ama soo deji mid ka mid ah abka mobaylka si aad u bilowdo!
Adobe Creative Cloud Express Hal-abuurka Cloud Express iOS Hal-abuurka Cloud Express Android
Tags: Adobe halabuur Cloud expressadoon dhimbiiladobeadobe post postadobe dhimbiil videoxayeesiintafiidiyo muuqaal lehxayiraadkaararka ganacsigaabuur garaafyosamee garaafyada warbaahinta bulshadatafatirka fiidiyahaFlyersSheekooyinka instagramcalaamadahaboodhadhkawadaag sheekooyinsawirada bulshadasheekoedit videosheekooyinka webkacalamada youtube